Mahajanga: maharary amin’ireo zokiolona ny tsy fahazoana ny valin-kasasarana ara-dàlana | Région Boeny
Mahajanga: maharary amin’ireo zokiolona ny tsy fahazoana ny valin-kasasarana ara-dàlana
10 janvier 2017 A La Une, Actualité
Maharary ny tsy fahazoana ny valinkasasarana mifanaraka amin’ny 15 taona niasana sy ny mihoatra hoy ireo Zokiolona mitambatra Miray Misotro Ronono ny sabotsy 7 janoary 2017, raha nankalaza ny faha 10 taonan’ny fikambanany sy nifampiarahaba tratry ny taona izy ireo tao Manga Mahajanga.
Zokiolona mitambatra mpandray fisotroan-dronono ao amin’ny CNAPS eto Mahajanga izy ireo ary namoaka ny hetahetany nandritra izao fihaonana izao. Satria voalazan’izy ireo fa na dia misy aza ny famoahana ny lalàna fampiharana mikasika ny fanatsarana momba ny volan’ny fisotroan-dronono, dia mbola tsy misitraka izany izy ireo ary feno fanahina amin’ny hahatanteraka izany.
Tsy hanatanteraka fikorontanana eto amin’ny firenena ny zokiolona sy ny fikambanana hitambaran’izy ireo satria tsy manao politika fa fitakiana ny rariny sy ny hitsiny ho an’ireo efa misotro ronono ary tsy manaiky ny hanaovana ambaninjavatra ny zokiolona fostiny no tanjona, hoy ny filohan’ny fikambanana, Atoa Rahamahasambatra Joseph.
“Manomboka ny 1 janoary hatramin’ny 15 na 20 janoary 2017 ny fara fiaretanay ny amin’ny fandraisana ny fisotroan-dronono tsy ara-dalàna sy tsy ara-potoana, fa raha tsy voalamina izay, dia manana paikady fitakiana hafa izahay” hoy ihany ny filohan’ny fikambanana.
Arak’izany dia iangavian’ireo mpisotroronono ny mpitondra fanjakana mba hitodika amin’izy ireo hanara-maso ny fanatsarana ny volan’ny fisotroan-dronono raisin’izy ireo.
Mivondrona ao anatin’ny «Solidarité des Syndicats de Madagascar» ihany koa ity fikambanan’ny zokiolona eto Mahajanga ity, mba hiady ireo zo sy izay fisotroan-drononon’izy ireo izay.